Vatsim-panahy – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 avril 29, 2011 avril 29, 2011 Un commentaire sur Vatsim-panahy
Ry havana malala, tapaka sy namana hajaina,
‘Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika.’ (2 Pet. 1:2)
Fifaliana ho an’ny Feon’ny Filazantsara ny manao izao ‘vatsim-panahy’ mivoaka isan-andro izao, ho fanamarihana ny tonon-taonan’ny Advento 2009, Taom-baovaon’ny Fiangonana. Halefanay isan-andro aminao izy ity, manomboka anio Alahady 29 Novambra hatramin’ny Alahady 3 Janoary 2010.
‘Vatsim-panahy isan-andro’ navoakan’ny Lutheran Hour Ministries, foiben’ny Feon’ny Filazantsara any Etazonia izy ity, no nadikan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny fiteny Malagasy, ary nampifanarahany amin’ny zava-misy mba hahazoantsika rehetra mamaky ary koa mampiasa azy eo amin’ny sehatra rehetra izay misy antsika, na ny tsirairay am-batana, na an-tokantrano, na Fiangonana, na sehatra hafa koa.
Mety ho hafa kely aminao mpamaky ihany ny fomba isehoan’ny vatsim-panahy izay hovakianao isan-andro ato, dia ny amin’ireo sarisary mikasika sakafo sy ‘hanitra’ samihafa ampiasain’ny mpanoratra ampidirany ny votoatin-dresaka isan-andro. Mety ho tsy mahazatra ny sasantsasany ihany koa aza ny voam-bolana sy ny toe-javatra ho hitany ato. Antenainay anefa fa tsy ho sakana ho anao izany, handraisanao ny hafatra avy amin’Andriamanitra izay entin’ity ‘vatsim-panahy’ ity amin’izao Advento izao.
Fanombohana ihany izao hatao mandritra ny vanim-potoanan’ny Advento izao; raha hita fa mahaliana antsika mpamaky, dia hotohizana ny fandefasana izany, manomboka amin’ny Janoary 2010, amin’ny alalan’ny E-mail toy izao, mety ho isan-kerinandro raha sitrapon’Andriamanitra; ary ny irina, dia ho famoahana vitantsika avy eto an-toerana manontolo no atolotra amin’izany.
Koa aza misalasala ary manatona na manoratra aty amin’ny Feon’ny Filazantsara fa famporisihina lehibe ho anay izany; fifaliana ho anay tokoa raha mba afaka mifandray isika, amin’ny alalan’izao ‘Vatsim-panahy’ izao, hahazoanay mandray izay mety ho fanamarihana na famporisihana avy aminao. Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany anie izany !
Hitondra soa ho antsika rehetra anie izao ‘Vatsim-panahy isan-andro’ izao, ary hanampy antsika hamakivaky izao Advento 2009 izao.
Filohan’ny Komitin’ny Feon’ny Filazantsara
Talen’ny Feon’ny Filazantsara
Nota : Sitrakay tokoa ny hizara izao ‘Vatsim-panahy isan-andro’ izao aminao.
Kanefa raha sanatria misy lafiny tsy mampazoto anao handray izany, dia miangavy indrindra anao an-tanandroa izahay hampahafantatra izany aminay mba hanajanonanay ny fandefasanay azy aty aminao; zonao izany. Misaotra indrindra Tompoko.
Tsidiho ny SiteWeb ny Feon’ny Filazantsara (www.filazantsara.org)
Publié parfilazantsaramada avril 29, 2011 avril 29, 2011 Publié dansUncategorized
Mr WordPress a dit :
avril 29, 2011 à 5:12